POLITIKA : Efa very fitokisana i Ravalomanana, Rajaonarimampianina ary Roland Ratsiraka
Sarintsarim-pihavanana sa fihavanana ho an’ny famotehana ny firenena ? Mitady ny fomba rehetra hanozongozonana ny Fitondrana Rajoelina ny mpanohitra ankehitriny. 24 novembre 2021
Na tsy hahandry fifidianana Filoham-pirenena amin’ny taona 2023 aza dia izay fomba rehetra ahazoana fahefana no kendren’izy ireo fatratra.
Tsy manana ny lanjany ary tsy atokisam-bahoaka intsony raha ny ankamaroan’ireo mpanohitra. Tsy mena mivadika toy ny andro ririnina, hoy ny fitenenana, ary mora mihavana rehefa hikatsaka izay tombontsoany manokana. Ny vokatry ny fifidianana filoham-pirenena tamin’ny taona 2018 farany teo no ampy hamaritra izany. Ny Filoha teo aloha Ravalomanana Marc izay nabaribarin’ny vahoaka malagasy fa tsy mety amin’ny fitantanana ny firenena intsony.
Efa leom-boananana nandritra ireo taona maro nitondrany an’i Madagasikara ny olom-pirenena. Fanamparam-pahefana, fanagiazana ny famokarana sy ny tsena ary fanagadrana olona izay hodiany tsy tsaroana ankehitriny, ireo no nahafantarana izany Filoha teo aloha Ravalomanana Marc izany. Manomboka mivondrona sy mifanakaiky ireo mpanohitra amin’izao tamin’ny alalan’ilay hetsiky ny Solombavambahoaka Roland Ratsiraka tetsy Anosy, ny faran’ny herinandro teo. Ity farany izay haloan’ny vahoakan’i Toamasina tsy ho ela ihany koa raha ny fomba fanaovany politika ankehitriny. Manampy azy ireo ihany koa ny Filoha teo aloha Rajaonarimampianina, izany hoe, avondron’ny fankahalana ny Fitondram-panjakana ankehitriny izay tarihin’ny Filoha Andry Rajoelina.
Mpanao politika naloam-bahoaka
Na ny Filoha teo aloha, Ravalomanana Marc na ny Filoha teo aloha, Hery Rajaonarimampianina dia samy efa noporofoin’ny vahoaka avokoa fa tsy mendrika hitantana ny firenena intsony. Ity farany izay nibaby fahafaham-baraka tanteraka nanoloana ny valim-pifidianana Filoham-pirenena farany teo iny. Tsy arakaraka ny naha Filoha am-perin’asa azy ny isam-bato azony izay zavatra tsy dia fahita firy maneran-tany. Ny Filoha teo aloha Ravalomanana Marc dia efa ireny niaraha-nahita ireny ny voka-pifidianana. Mijoro manampy azy ireo ny Solombavambahoaka voafidy tao Toamasina voalohany, Roland Ratsiraka. Ity farany ihany koa dia heverina fa haloam-bahoaka atsy ho atsy satria voaporofo izao fa isan’ireo mpanao politika mpivadi-dela sy tsy mitana ny teny nomeny.
Indroa miantoana ny tenany no voafidy ho ben’ny tanànan’i Toamasina voalohany dia tamin’ny taona 1999 sy ny taona 2003. Mbola niverina nilatsaka ben’ny tanàna indray izy farany teo saingy tsy nolanian’ny vahoakan’i Toamasina intsony. Raha tsiahivina fohy ny tantara dia tena nankahalain- dRavalomanana tanteraka izay Filoham-pirenena tamin’izany fotoana izany ny tenany. Niafara tamin’ny fampidirana am-ponja an’i Roland Ratsiraka mihitsy aza ny fanenjehana azy tamin’izany. Nahavita nilaza ity farany hoe ,”tsy matoky an’iny rangahy iny intsony aho satria fantatro tsara ny ao am-pony sy ny ao an-tsainy”, hoy izy. Nahagaga anefa fa tao anatin’ny fitovian-kevitra hanohitra ny Fitondrana Andry Rajoelina no nampihavana ny roa tonta.
Mikonona korontana amin’ny fifidianana 2023 ?
Hitambatra handrombaka fahefana mialoha ny fotoana. Amin’ny ankapobeny, io no tanjona imatimatesan’ireo mpanohitra, ka mahatonga azy ireo mikivorivory etsy sy eroa. Ny RMDM sy ny Filoha teo aloha Ravalomanana Marc aza dia efa nilaza fa “efa fotoana tokony hakantsika ny fahefana izao”. Raha ny lahateny nataon’ny Solombavambahoaka Roland Ratsiraka tetsy amin’ny Carlton Anosy, ny sabotsy teo, dia efa mandrangaranga fanakorontanana sahady izy ireo amin’ny fotoam-pifidianana izay hotanterahina ny 2023 ho avy io. Notsikerainy avokoa hatramin’ireo mpikambana eo anivon’ny Ceni. Mapametram-panontaniana hoe, tamin’ny Fitondran’iza no nametraka ireo mpikamban’ny Ceni teo aloha izay efa nahavita ny fe-potoam-piasany ? Tsy ny Fitondrana Rajaonarimampianina ? Kanefa dia ireny niaraha-nahita ireny ny voka-pifidianana. Mitady irika sahady ny hamelezana ny Fanjakana izy ireo sy hanasoketana ho nangala-bato mandritra ny fifidianana io fifidianana satria efa matahotra ny tsy ho lany. An-kilany, ireo paikady sy tetika madinidinika hoentina hanomezana endrika ratsy ny Fitondrana eo imasom-bahoaka dia lasa fomba raiki-tampisaka amin’ireto mpanao politika naloam-bahoaka ireto. Ezahina haratsiana ny asa rehetra vita, ezahina tsy omena lanja ny asa fampandrosoana izay efa tontosa satria matahotra ny voka-pifidianana amin’ny taona 2023 ry zareo.